असुरक्षित यौन सम्पर्कपछि गर्भ बस्न नदिन के गर्ने ? -
असुरक्षित यौन सम्पर्कपछि गर्भ बस्न नदिन के गर्ने ?
एजेन्सी : सेक्स गर्नुस् तर, सावधानी अपनाएर । सेक्स कहिले र कसरी गर्ने, महिनावारीमा सेक्स गर्ने वा नगर्ने । गर्ने हो भने कहिले गर्ने ताकि गर्भ नरहोस्। यस्ता केही प्रश्नबाट अधिकांश युवायुवती परेशान हुन्छन्।
सेक्सलाई लिएर सबैभन्दा बढी जिज्ञासा महिनावारीको समयमा हुन्छ। एक आम धारणा छ कि महिनावारी भएको १४ देखि १६ दिनको बीचमा यदि तपाई सेक्स गर्नुहुन्छ भने गर्भ रहने सम्भावना कम हुन्छ । यद्यपी यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन कि बाँकी दिनमा गर्भ रहन्छ । उसो त महिलाहरुको महिनावारी चक्र अलग अलग हुन्छ । यो पनि जरुरी छैन् कि तपाईको माहिनावारी भएन भने तपाई गर्भवती हुनुभयो ।
तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न यो शंका अब घर बसेरै दूर गर्नसक्नुहुन्छ । कुनै औषधि पसलबाट प्रेग्नेन्सी चेक किट ल्याउनुस् र ५ मिनेटमा पत्ता लगाउनुस् कि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न् । यसका लागि विहानै पहिलो यूरिन किटमा दिएको कार्डको माथि हाल्नुस् । पाँच मिनेटपछि रिजल्ट आउनेछ । गर्भधारणबाट बच्नका लागि कैयौ विकल्प छन् ।
कपर टी यो सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । यो १० वर्षसम्म प्रभावकारी हुन्छ । यो एक सानो टी को आकारको प्लाष्टिक हुन्छ जसलाई महिलाको गर्भाशयमा लगाइन्छ । सेक्सको क्रममा कण्डमको प्रयोग गर्दा पनि गर्भ बस्दैन् । तर, कण्डम प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला त्यसको सही प्रयोगबारे जानकारी हुनु जरुरी हुन्छ ।
प्रग्नेन्सी रोक्नका लागि महिला पुरुष दुबै नसबन्दी पनि गराउन सक्छन् । उसो त गर्भधारणबाट बच्नका लागि बजारमा कैयौ प्रकारका गर्भनिरोधक गोलीहरु पाइन्छ । जसको सेवन गर्नाले गर्भ बस्दैन् । असुरक्षित यौन सम्पर्क राखेको ७२ घण्टाभित्र यी गोलीहरु खाए गर्भधारणको सम्भावना कम हुन्छ ।
यो गोली खाएपछि सेक्स गर्नु झन सही मानिन्छ । यद्यपी खाली पेट यो गोली खादा वान्ता हुनसक्छ । यदि गोली खाएको तीन घण्टामै तपाईलाई वान्ता हुन्छ भने तुरुन्त दोस्रो गोली खानुस् ।
– बिना कण्डम सेक्स नगर्नुस् । महिनावारीको समयमा यदि सेक्स गर्नुपरे कण्डमको अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुस् । यसले गर्भाधारणबाट मात्र बचाउनेछैन् बल्कि सेक्सुअली ट्रान्मिटेड डिजीजबाट पनि बचाउनेछ ।
– महिनावारीको बेला असुरक्षित यौनसम्पर्क नराख्नुस् । कति मानिस सम्झिन्छन् कि उनको गणित काफी मजबुत छ र महिनावारीका बेला विना कण्डम असुरक्षित यौनसम्पर्क राख्छन् । भुलेरपनि यस्तो नगर्नुस् । असुरक्षित यौनसम्बन्ध सधै खतरनाक हुन्छ ।
– तपाई यो भ्रममा नपर्नुस् कि यदि तपाई सेक्सको बेला विदड्रा विधि अपनाउदा गर्भ बस्दैन भनेर । सेक्सको बेला अधिकांश पुरुष चरम उत्कर्षमा पुग्छन् । आफ्नो लिंगलाई पार्टनरको योनीबाट बाहिर निकाल्छन् । यो गलत तरिका हो यसबाट पनि गर्भ बस्ने खतरा हुन्छ ।
– कहिले कहिले सेक्सको बेला चरमसुखका लागि महिला र पुरुष दुबै आपसमा हस्तमैथुन गर्छन् । महिला यदि पुरुषको हस्तमैथुन गर्छिन् भने यो सम्भव छ कि उनको हातको औलामा विर्य लाग्न जान्छ र यदि दोस्रोपटक यो औलालाई आफ्नो योनीमा हाल्दा यो सम्भव छ कि वीर्य योनीबाट भित्र छिर्छ र गर्भ बस्न सक्छ । त्यसैले यस्तो नगर्नुस् ।
ठूलो रकम सहित उदयपुरमा तास खेलाडी पक्राउ